Wararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Messi, Balotelli, Bellingham, Guardiola, Pogba, Traore | | Ciyaaro
[ December 1, 2020 ] Wararka Xanta Suuqa Kala iibsiga:Giroud, Torres, Ferrari, Schuurs, Eriksen, Alaba	Horyaalada Kale
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Messi, Balotelli, Bellingham, Guardiola, Pogba, Traore
Wararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Messi, Balotelli, Bellingham, Guardiola, Pogba, Traore
November 18, 2020 Horyaalada Kale, Horyaalka England, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suqa kala iibsiga, Wararka Maanta 0
Weeraryahankii hore ee Manchester City iyo Liverpool Mario Balotelli ayaa wadahadalo la yeeshay Barnsley . 30 sano jir ah, ayaa suuqa xorta ku bixi kara marka uu dhamaado qandaraaskiisa. (Riix Halkan)
Manchester City ayaa diyaar u ah inay soo nooleyso xiisihii ay u qabtay weeraryahanka Barcelona Lionel Messi bisha Janaayo. 33 jirkaan reer Argentina ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka sidaas darteed waxaa lagu heli karaa qiimo jaban. (Riix Halkan)
19 jirka daafaca ee asal ahaan kasoo jeeda Jarmalka Malick Thiaw, oo qandaraas cusub saxiixay xagaagan, ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay wararka la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo Liverpool bisha Janaayo . (Riix Halkan)
Chelsea ayaa dooneysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Jude Bellingham, waxaana ay tixgelin doontaa dalab ay u dirto 17 jirkaan bedelkii ay ka soo qaadan laheyd ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham Declan Rice, oo 21 jir ah (Riix Halkan)
Tababare Pep Guardiola ayaan wali go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa kooxda Manchester City . Qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa xagaagan. (Riix Halkan)
Leicester ayaa isha ku heysa daafaca bidix ee reer Portugal Nuno Mendes, oo 18 jir ah, kaasoo qandaraaskiisa lagu burburin karo 40 milyan oo ginni ah kooxda Sporting Lisbon . (Riix Halkan)
Goolhayaha kooxda Chelsea Kepa Arrizabalaga ayaa diyaar u ah inuu dhimo mushaarkiisa si uu amaah uga helo kooxda bisha Janaayo. 26 jirkaan ayaa doonaya kubad joogto ah si uu uga caawiyo inuu xaqiijiyo booskiisa xulka Spain ee Euro 2020. (Riix)
Manchester City ayaa kula tartami doonta Bayern Munich tartanka saxiixa 23 jirka qadka dhexe ee Switzerland Denis Zakaria oo ka socda Borussia Monchengladbach . (Riix Halkan)
Ciyaaryahankii hore ee Juventus Claudio Marchiso ayaa ku booriyay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo France Paul Pogba, 27, inuu ku laabto kooxda reer Talyaani. (Riix Halkan)
Manchester United ayaa mudnaanta siineysa iibinta ciyaartoyda bisha Janaayo daafaca reer England Phil Jones, oo 28 jir ah, iyo labada xiddig ee reer Argentine ee Sergio Romero, 33, iyo daafaca 30 jirka ah Marcos Rojo. (Riix halkan)
Wadahadaladii heshiis kordhinta ee ay Wolves kula jirtay xiddiga garabka ka ciyaara Adama Traore ayaa hakad galay maxaa yeelay xiddiga reer Spain ayaan ku faraxsanayn joogitaankiisa ciyaareed la’aanta. 24 jirkaan ayaa horay loola xiriirinayay kooxda Barcelona. (Riix halkan)
West Ham ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto Real Madrid iyo weeraryahanka reer Spain iyo Dominican Mariano Diaz, 27. (Riix Halkan)
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay heshiis isku bedelasho ah la gasho Inter Milan taasoo u ogolaaneysa Denmark iyo xiddigii hore ee khadka dhexe ee Tottenham Christian Eriksen, oo 28 jir ah, inuu ku biiro Gunners halka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Switzerland Granit Xhaka, 28, uu u dhaqaaqo kooxda reer Talyaani. (Riix Halkan)
Arsenal ayaa sidoo kale wadahadalo kula jirta si ay amaah ugu dirto daafaca reer France William Saliba xilli ciyaareedka dambe. 19 jirkaan ayaan weli kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaarin Gunners. (Riix Halkan)
Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay inuu doonayay inuu lasoo saxiixdo daafaca Liverpool Virgil van Dijk iyo kan Inter Milan Romelu Lukaku markii uu joogay kooxda. (Riix Halkan)
Weeraryahanka Chelsea iyo xulka France Olivier Giroud, oo 34 jir ah, ayaa isku dayi doona inuu ka tago kooxda bisha Janaayo hadii waqtigiisa ciyaareed uusan kor u kicin bilaha soo socda. (riix Halkan)
Arsenal ma la soo saxiixaneyso Mitchel Bergkamp – wiilka uu dhalay halyeeyga Gunners Dennis Bergkamp – inkastoo 22 jirkaan reer Holland uu usbuuc ku qaatay tijaabada kooxda. (Riix halkan)
Kala Soco Warar kooban oo xiiso leh
Wararka Xanta waxaa masuul ka ah websiteyada ku xusan
Manchester City oo isha ku heysa Macalimiinta kala ah Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann?
Son Heung-min oo ku soo laabtay Kooxda Tottenham Hotspur ka hor kulanka Man City
Wararka Xanta Suuqa Kala iibsiga:Giroud, Torres, Ferrari, Schuurs, Eriksen, Alaba